Dos र सामग्री मार्केटिंगको नहुनु | Martech Zone
Dos र सामग्री मार्केटिंगको काम गर्नुहुन्न
सोमबार, सेप्टेम्बर 30, 2013 मङ्गलबार, अक्टोबर 1, 2013 Douglas Karr
ठिक छ, दिउँसोको लागि यहाँ तपाईंको बकवास छ। प्रयोग गर्दै मेल्टवटर बज, हामीले भर्खर देख्यौं यो सरल र सुन्दर इन्फोग्राफिक प्रदान गर्ने वस्तुहरूको राम्रो चेकलिस्ट प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिले उनीहरूको सामग्री मार्केटिंग रणनीति विकास गर्दा दिमागमा राख्न चाह्न सक्छ।
ब्लगिंग को सम्बन्ध मा एक नियम छ नराम्रो रूपमा लेखिएको ब्लग प्रकाशित नगर्नुहोस्। मैले धेरै नराम्रो लेखोटहरू (शीर्षक बाहिर, तथ्यलाई अभिव्यक्त गर्दै, अवास्तविक) देखेको छ जुन अझै राम्रो व्याकरण र हिज्जे छ, त्यसैले म तिनीहरूको विश्वासको मतलब के हो भनेर विश्वास गर्दछु। खराब लेखिएको ब्लग। मेरो पोष्टहरू प्रायः खराब लेखिएका हुन्छन् ... तर मलाई लाग्छ उनीहरूसँग अझै पनि बहुमूल्य सामग्री छ… सही व्याकरण र ओर्थोग्राफरहरूको लागि? मेरो विचारमा, तपाईंको सामग्रीको मूल्यले कति राम्रो ढ written्गले लेखिएको छ। त्यो मेरो राय मात्र हो किनकि म व्याकरण र हिज्जेमा शोषण गर्छु, यद्यपि।
यदि म अडान लिन जाँदैछु कि तपाईको सबै सामग्रीहरू सटीकका साथ लेख्नुपर्दछ, मलाई यो धेरै इन्फोग्राफिकको साथ वास्तविक समस्या हुन सक्छ। इन्फोग्राफिक भनिन्छ गर्नुहोस् र नगर्नुहोस् सामग्री मार्केटिंगको। यहाँसम्म कि अ terrible्ग्रेजी भाषाको मेरो डरलाग्दो अज्ञानले मलाई शीर्षकमा डबल-टेक गर्यो। यो हुनु हुँदैन Dos र सामग्री मार्केटिंगको काम गर्नुहुन्न?
अक्टोबर 1, 2013 बिहान 9:23 बजे
आश्चर्यजनक सुझावहरू डग! तपाईंले यसलाई फेरि नेल गर्नुभयो .. मैले वास्तवमै एक धेरै जानकारीमूलक पढिएको थियो .. साझेदारीको लागि धन्यवाद!
अक्टोबर 3, 2013 बिहान 7:25 बजे
हे डगलस, साझेदारीको लागि धन्यवाद। यो एक धेरै राम्रो इन्फोग्राफिक हो, धेरै उपयोगी सुझावहरु संग। मैले पोस्टमा तपाईंको टिप्पणी नपढेसम्म मैले शीर्षकमा टाइपको त्रुटि पनि याद गरेको छैन 🙂 र तपाईं सहि हुनुहुन्छ, यो "Dos" हुनुपर्छ।